Ukuphrinta inethiwekhi isingeniso umsebenzi walo - China Changzhou Plet Ukuphrinta
Ukuphrinta inethiwekhi isingeniso umsebenzi wayo
Amachashazi ukuphrinta bafeza indima ebaluleke kakhulu. Dots ungadlulisa gradations, amazinga, kanye nemibala yesithombe. Noma yimuphi ukucabanga noma omoya yakhiwa sombala izinhlayiyana noma izinhlayiya esiliva ukwakha ithoni okuqhubekayo ukuqhakaza. Lokhu ithoni ukuqhakaza futhi ungqimba kumele izithombe noma ezinye izindlela ingxenye isithombe amachashazi ezinkulu nezincane.
Dots kukhona iyunithi eyisisekelo ihluzo phezu plate, futhi banesibopho ekukhiqizweni amathoni yolimi lokuqala, sabaphathi yenhlangano, futhi kuhlaka yesithombe. Ngokusho isimiso inethiwekhi, kungashiwo ihlukaniswe ezimbili izinhlobo inethiwekhi amplitude-modulating futhi imvamisa-modulating inethiwekhi. Lo mqeqeshi owake wapheka iye kabanzi. Ukusetshenziswa izindlela ezehlukene (ingilazi zesikrini, contact izikrini, futhi kagesi ngokwahlukana ubuchwepheshe) ingafinyelela lolu hlobo Izitolo, okungase kabanzi ngenxa elula, okusheshayo, futhi okuhle imaging ngemiphumela yako. Ngesikhathi esifanayo, abantu futhi awubona ngokucacile kwamaphutha alo, ezifana ukuqedwa ngokuphelele moire, kanjalo ekusungulweni kobuchwepheshe bokuthuthukisa wokunyathelisa, abantu baqala ukuvula ukunakekela esinye uhlobo inethiwekhi - FM inethiwekhi ezijwayelekile.
Imvamisa ukushintshashintsha kwezwi Ukuhlolwa mbono uye yakhiqizwa isikhathi esithile. Ekuqaleni kuka-1993, Agfa Division uHlelo Lwesiqondisi Kungena Esilula-Hogo Corporation limise FM inethiwekhi Ukuhlolwa ubuchwepheshe. Ngo-August 1993, China Umsunguli Beijing University nesimiso FM Ukuhlolwa ubuchwepheshe yayo.
FM Ukuhlolwa ubuchwepheshe isithombe ihlolelwa nokokufaka, emva processing, ngokusebenzisa idivayisi okukhiphayo uma usayizi ofanayo amaphuzu ngokunganaki kwasakazwa izikhala ezahlukene, inani lamaphuzu kanye kwabantu, okungukuthi, ukuvama ukubukeka iphuzu inethiwekhi, e oda ukuveza Wugqinsi isithombe bese wokwehlayo izindlela lobuchwepheshe. Ngakho-ke, i-fineness yesithombe limelela ayisaxhunyanisiwe wachaza ngenani imigqa omnyama nomhlophe e isentimitha ngamunye, kodwa kuchazwa ubukhulu amachashazi. Zincane usayizi dot, ayanda ukunemba isithombe okungatholakala amelwe. The kangcono.
Ubuchwepheshe ukhiqiza izithombe ukuthi sesiseduze imiphumela lokushicilela. Ngenxa ezahlukene ukuchayeka amazinga enqubeni enezithombe, kunomehluko inani photosensitive esiliva usawoti izinhlayiya endaweni efanayo. Ngemva ukuthuthukiswa, zimbalwa esiliva usawoti izinhlayiya ngesikhathi ukuminyana ongaphakeme isithombe, futhi baningi izinhlayiya usawoti isiliva high density, futhi ushintsho ukuminyana kunqunywa inani usawoti izinhlayiya esiliva ezindaweni ezahlukene. Lokhu kufana inethiwekhi FM, kanye amplitude we amasayithi AM lihlukile. Basuke uzwakalise ngobukhulu ichashazi (e inombolo), ngakho-ke abakwazi ukufeza umphumela eduze izithombe.
Njengamanje, izinkampani sethule ezahlukene izakhiwo ichashaza futhi banikezwe amagama ahlukene, njengokuthi "Crystal Inethiwekhi" Agfa sika, uHlelo Lwesiqondisi Kungena Esilula-yesihogo "Diamond Odidiyelwe", Dainippon Screen sika "RANDOT", njll Ngakho-ke, inani kanye nendawo yokunyathelisa amachashazi isithombe ngasinye endaweni unit zihlukile, kodwa zonke basonta FM ukuhlolwa.
Usayizi anezikhala of ukuhlolwa FM incike isinqumo okukhipha kanye nemingcele ukuhlolwa. Ngokwesibonelo, uma isinqumo wokukhipha 2400 dpi, futhi ipharamitha Ukuhlolwa kuyinto 2 × 2 laser amachashazi njengoba iphuzu kunethiwekhi, ubukhulu isikrini 21 μm; nemingcele Ukuhlolwa kukhona Nge 3 × 3 laser amachashazi ichashaza, ububanzi Ichashazi 32 μm.
Ngo lonke inqubo, esinquma kakhulu ukuguquka futhi ukulungiswa we inethiwekhi FM. Umnyombo iwukukhetha ezifanele randomness kanye laser ugongolo ubukhulu. I esisha esenziwe FM inethiwekhi amaphuzu iyashelela futhi okuqinile, iyunifomu ngobukhulu, futhi ube kancane izindawo ukukhanya elingalodwa, lokuyintfo lesemcoka ukulawula izinga. Entsha umshini ukuhlelwa wanelisa kule mfuneko. I ububanzi laser ugongolo kungase kushintshwe ngokwendlela ubukhulu ichashaza. Ngaphezu kwalokho, ukuze abambisane inqubo elandelayo, ukunakekelwa okufanele futhi kukhokhelwe ngokukhetha inzuzo dot, okungase ngokuvamile zingalawulwa esezingeni 5%. Ngaphezu okungenhla, izithombe izithombe kufanele wageza ngokunaka lokushisa, isivinini, futhi pH amagugu, futhi kufanele wageza nge high-speed izitembu ashisayo ukuqinisekisa ikhwalithi imibono. Ngokuya ukuphrinta, ngenxa yokuthi kukhona awapheli engela isikrini e imvamisa bashintshashintshe izwi, bahlabe ukunemba imishini overprinting kunalokho ongaphakeme, futhi uyinki umbala ngokuvamile asetshenziselwa futhi eyamukelekayo.